Maxaa Sababa Abaaraha Kuso noq noqda Somaaliya? (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 27, 2018 12:47 g 0
Bilihii ugu dambeeyay abaaro ba’an ayaa waxa ay laga soo sheegayaa qeyba badan oo ka mid ah gobollada nugaal iyo Karkaaraa.
Abaarahaasi ayaa sameeyay dad iyo dunyaba, hasayeeshee meelaha qaar ayaa laga soo sheegayaa in ay dadku ay gurmad deg deg ah u baahan-yihiin.
Dhanka kalana Qaramada Midoobay ayaa waxaa ay ku qiyaasaysaa in shan milyan oo qof ay u baahan yihiin cuno gargaar ah.
C/salaan yuusuf aadan (Dhoola yare) oo ka mid aqoonyahanada siyaasadda ka faalooda kuna sugan Puntland ayaa sharraxaya waxyaabaha keenaya abaarta soo noq noqonaysa iyo sidda looga bixi karo.